Ahoana ny fampiasan'ny mpivarotra haino aman-jery sosialy?
Alatsinainy, Aogositra 20, 2012 Alahady, Septambra 8, 2013 Douglas Karr
Raha manontany tena ianao hoe ahoana ny fampiasan'ny mpivarotra media sosialy ho an'ny orinasany, Hubspot nanangona sary fakana sary iray hanasongadinana ny valiny sasany avy amin'ireo 6,491 nanaovana valinteny fanadihadiana natao tamin'i Moz. Navoaka tamin'ny a webinar iraisan'ny Hubspot ary Moz ankehitriny. Stat iray mahaliana iray, 44.4% amin'ireo mpamaly ny fanadihadiana no nilaza fa ny fahaizany amin'ny haino aman-jery sosialy dia tao Advanced or manam-pahaizana ambaratonga!
Infographic avy amin'ny: Rindrambaiko Marketing HubSpot. Fialana andraikitra: mpiara-miasa amin'ny HubSpot izahay.
Tags: haino aman-jery sosialy mandrosohubspotseomozmanam-pahaizana momba ny haino aman-jery sosialyfanadihadiana amin'ny media sosialy
Google: Subdomain na Subfolder ho an'ny fiteny maro
Mampahafantatra WordPress Teleport